Stevie Wonder ajoina Apple kuzotikorokotedza paKisimusi | IPhone nhau
Kisimusi iri kuuya, mangwana nderimwe remazuva pre-kisimusi mazuva akakosha kwazvo egore nekuti anopembererwa (pakutanga) muUnited States uye mune dzimwe nyika zhinji musi weChishanu Chishanu, zuva rinonyanya kukosha maererano nekutenga rinonetsekana nekuda kwekudzikiswa kwese kunoitwa nezvitoro kuitira kutanga Kisimusi. mushandirapamwe uye gadzirira yekutenda yekutenga (muUnited States iri tsika zuva rekupa zvipo).
Un zuva rekutora mukana wekutenga kweKisimusi kweiyi 2015. Uye ndezvekuti isu tatova paKisimusi, mangwana kushongedzwa kweKisimusi kwemaguta mazhinji eSpain kuchavhurwa. Uye Apple yaisazove iri shoma futi, ndosaka iyo Cupertino kambani ichangoburitsa yavo yazvino yakasarudzika yeKisimusi kushambadza. A chitsva chitsva icho nguva ino nyeredzi (fanboy) Stevie Wonder ...
Sezvauri kuona panzvimbo, Stevie Wonder anoperekedzwa nemunyori Andra Zuva, uye vese vanoimba rwiyo Rimwe zuva pakisimusi rwiyo rwunoratidza hunhu hwese hunodikanwa neApple mune iwo mweya weKisimusi weiyo 2015.
Un vanoziva kwazvo uye vane moyo vhidhiyo, vese vanoimba rwiyo mune ino nharaunda yakakomberedzwa neApple zvishandiso. Muchokwadi tinogona kuona kuti St iyeevie Wonder anotanga kuumbiridza pane Mac neiyo Garageband app zvaisanganisira. Isu tinoonawo sei nekuda kwehupofu hunoita kunge hwunoshandisa VoiceOver kudzora pasina chero muganho Mac yako ine OS X El Capitan. Apple, kambani yakagara iinesu Kisimusi yega yega, izvozvi Isu tinongoda kuti tione zvichaitika neApple's BlackFridayGore rakapera havana kupa chero kupihwa asi chero chinhu chinogona kuitika nevakomana ava vanobva kuCupertino ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Stevie Wonder ajoina Apple kuzotikorokotedza paKisimusi
Geekbench 3 yeIOS inowanikwa mahara